I-Adobe Acrobat - Umculo wamahhala kunye nokulandelwa kweendaba kwiividiyo zakho ze-YouTube okanye iiprojekthi ze-multimedia
Udidi: Adobe Acrobat
I-Adobe Acrobat yintsapho yesofthiwe yesicelo kunye neenkonzo zewebhu eziphuhliswe ngu-Adobe Inc. ukujonga, ukudala, ukuphatha, ukuprinta nokulawula iifayile kwiFomathi yoCwangciso oluPhezulu (PDF). Intsapho iquka i-Acrobat Reader (owayengumfundi we-Reader), i-Acrobat (yangaphambili i-Exchange) ne-Acrobat.com. I-Acrobat Reader eyisiseko, ekhoyo kwiipolisi ezininzi kunye neeselula, i-freeware; isekela ukubukela, ukuprinta nokuchazwa kweefayile zePaul. Okongeziweyo, "iNkcazo", iinkonzo ziyafumaneka kubafundi ekubhaliseni okubhadelwe. I-Acrobat enezentengiso, ekhoyo kwiMicrosoft Windows kunye ne-MacOS kuphela, inokudala, iguqule, iguqulwe, isayine idijithali, ibethelwe, ikhuphe, ipapashe iifayile ze-PDF. I-Acrobat.com izalisekisa intsapho ngeendlela ezahlukeneyo zokuphathwa kwezinto zoshishino kunye neenkonzo zokubamba iifayile.